Marketpple, fampiharana hividy sy hivarotra ny vokatra Apple | Vaovao IPhone
Marketpple, ny fihaonanao hanondroana hividy sy hivarotra ny vokatra Apple
Te hividy iPhone fanindroany ve ianao ary tsy fantatra hoe aiza no hanomboka hitady? Te hivarotra ny MacBook efa niasa ianao ary tsy mahalala an'iza? Izay tadiavinao dia antsoina Marketpple, rindranasa ho an'ny iOS (tsy misy amin'ny Android) izay toeram-pivoriana ho an'ireo izay te-hivarotra vokatra Apple ary ireo izay te-hividy izany na vokatra paoma hafa.
Fa inona marina ny Marketpple? Araka ny tondroin'ilay anarana dia momba ilay izy 'Apple market', fa ny faharoa. Ny serivisy dia somary mampatsiahy ireo rindranasa hafa izay ahafahantsika mitady vokatra faharoa, mahita azy ireo ary mividy azy ireo, fa ny fahasamihafana lehibe indrindra, raha liana amin'ny fifanakalozana vokatra Apple isika, amin'ny Marketpple dia tsy ho variana amin'ny olona an'arivony isika. ireo entana izay tsy mahaliana antsika, fa handeha mivantana any amin'ilay teboka isika, sa tsia, paoma.
1 Marketpple no tsenan'i Apple faharoa
2 Vokatra Apple akaiky ny toerana misy anay
3 Mandefasa ary mandray ny vokatra Apple fa tsy manahy momba ny orinasa lozisialy
4 Marketpple dia manolotra firesahana tsotra sy tsy manelingelina indrindra azonao eritreretina
Marketpple no tsenan'i Apple faharoa
Ny fiasan'ity fampiharana ity amin'ny fividianana sy fivarotana ireo vokatra Apple dia tena tsotra. Aorian'ny fisintomana, fametrahana ary fanombohana ny fangatahana, dia hangataka fahazoan-dàlana hiditra amin'ny toerana misy antsika izy io, manan-danja raha te hahita isika safidy akaiky antsika,; fahazoan-dàlana handefa fampandrenesana ho anay, tena ilaina hiresahana amin'ireo mpampiasa ny serivisy; ary nick. Izay ihany ny fisoratana anarana angatahinay aminay. Avy eto dia afaka manao ny ambiny isika.
Amin'ny efijery lehibe dia ho hitantsika ireo safidy:
nasongadina, izay azontsika faritana ho toy ny tabilao fanaovana bulletin (fisehoan-javatra) izay hisehoan'ny vokatra avy amin'ny olona nandoa vola mba hahitana fahitana.
Accessories, izay ahitantsika ireo kojakoja ofisialy ihany, fa ny karazan'entana avy amin'ny antoko fahatelo toy ny tranga, headphone, kapila mafy na router.
Amin'ity fomba ity dia tsy afaka misafidy afa-tsy ny vokatra mahaliana anao indrindra amin'ny vokatra Apple ianao ary hahita ny tolotra tsara indrindra misy ho azy.
Vokatra Apple akaiky ny toerana misy anay
Raha vantany vao miditra amin'ireo fizarana teo aloha isika dia hahita lahatsoratra izay somary akaiky ny faritra misy antsika, raha toa ka avelantsika hanomboka ny fangatahana voalohany ary izany no antony nilazany fa zava-dehibe izany. Raha mikasika ny kisary eo ankavanan'ny farany isika dia afaka mampihatra a sivana hanadio ny fikarohana: ny fomba famerana ny vidiny amin'ny fampidirana ny kely indrindra sy / na ny vidiny faran'izay betsaka, izay tanàna tianay hokarohina, rahoviana no tokony hisy ny doka, ary manasokajy ny fikarohana amin'ny datin'ny famoahana, ny akaiky indrindra anay na ny vidiny ambany indrindra. Raha somary kamo isika, dia afaka manindry ny vera fanamafisana foana isika ary mamaritra ny fikarohana ao anaty paompy vitsivitsy izay hanondroantsika ny karazana fitaovana, ny loko, ny fitehirizana sns.
Raha vantany vao hita ny safidy mahaliana antsika ary miditra ao, afaka manomboka miresaka amin'ny mpivarotra isika izay ahafahantsika mividy ilay entana na mitahiry azy raha sanatria tsy manana ny vola ilaina isika amin'izany fotoana izany, saingy fantatsika fa hanana izany isika atsy ho atsy. Raha izahay no nametraka ny doka, ny sisa tsy maintsy ataontsika dia ny miandry ny fangatahana handefa fampandrenesana amintsika fa misy olona te hifandray aminay.
Mandefasa ary mandray ny vokatra Apple fa tsy manahy momba ny orinasa lozisialy
Ny iray izay angamba ny teboka mahaliana indrindra na mampiavaka an'ireo rehetra ao anatin'ny Marketpple dia ny fandefasana ireo fonosana. Ny serivisy fividianana / fivarotana entana dia ampiasaina mba hametrahana fifandraisana amin'ny mpivarotra sy ny mpividy. Ny farany. Tsy ratsy izany fa, raha ampitahaintsika amin'ny atolotray Marketpple dia azo antoka kokoa sy mora kokoa ny fividianana amin'ny fampiharana ity. Ny iray amin'ireo tombony lehibe dia ny Marketpple manana vola amin'ny rafitra fanaterana miaraka amin'ny fanokafana fonosana, izay miteraka fahatokisana bebe kokoa amin'ny fividianana. Farany, ny mpividy dia afaka manokatra ny fonosana hanamarina raha marina ny zava-drehetra. Haingana, mora ary azo antoka.
Raha miresaka fiarovana, Marketpple koa dia manana zavatra mahaliana amin'ity lafiny ity. Tsy toy ny serivisy hafa, tsy takiana amin'ny tanana ny mivarotra na amin'ny kaontinao any amin'ny banky, zavatra azo ampiasaina hanatanterahana scam indraindray. ny ny fandoavam-bola dia azo atao amin'ny alàlan'ny fampiharana ary io no hanatitra ny vola amin'ny mpivarotra, fa indray mandeha fotsiny dia marina sy vita ny fandidiana iray manontolo. Mazava ho azy, raha aleontsika, ny mpampiasa dia afaka mihaona amin'ny mpivarotra amin'ny fandefasana / fanangonana ary fandoavam-bola.
Marketpple dia manolotra firesahana tsotra sy tsy manelingelina indrindra azonao eritreretina
Raha vantany vao mahita zavatra mahaliana antsika isika dia hiomana hividy azy io. Raha resy lahatra isika fa tianay io, amin'ny paompy vitsivitsy dia nividianantsika azy. Raha tsy izany dia hevitra tsara foana ny mangataka fampahalalana vitsivitsy amin'ny ... zavatra toa a hiresaka. Ny atolotray antsika Marketpple dia tsy resaka hafa tahaka ireo amin'ny serivisy hafa, tsia. Ireo chat ireo dia manery antsika hieritreritra izay hosoratantsika ary somary mamorona mba hanomezana endrika tsara olona tsy fantatsika, izay mety tsy dia mahamenatra olona. Ny chat amin'ity rindranasa ity dia manome antsika ireto fihetsika manaraka ireto, azo kitihina fotsiny:
Mangataha fampahalalana. Zava-dehibe hatrany izany raha tsy mazava amintsika ny zavatra atolotra.
Manaova tolotra. Na dia efa tafiditra ao amin'ny doka aza ny vidiny, dia afaka mihetsiketsika kely foana isika. Ity safidy ity dia hanampy ireo sadaikatra izay sahirana mangataka rebate.
Maniry aho. Amin'ity safidy ity dia hanakatona ny fifampiraharahana izahay.
Hetsika miaraka amin'ny mpivarotra. Ho hitantsika eto ny dingana manaraka hanaovana ny fividianana, ny fomba hihaonana mba hakana ny vokatra na hifampiraharahana amin'ny vidin'ny fandefasana.
Na izany aza, izaho manokana dia nametraka ity rindranasa ity ary nitahiry tao amin'ny fampirimana "Vola" ahy izay mety hitranga amin'ny ho avy. Izaho dia iray amin'ireo mpampiasa mahita fa sarotra ny mividy na mivarotra amin'ny mpampiasa hafa an-tserasera. Na dia mora ampiasaina aza ny Marketpple raha, ohatra, dia mandefa a iPhone 8 mamaky tany ary tsy manana olom-pantatra vonona hividy ny iPhone 7 Plus aho, satria afaka amidiko amin'i Apple foana io nefa amin'ny vidiny mampihomehy.
Inona ny vokatra Apple hovidinao na hivarotanao amin'ny Marketpple?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Marketpple, ny fihaonanao hanondroana hividy sy hivarotra ny vokatra Apple
Yu-Gi-Oh! Duel Links dia misy any Etazonia sy Kanada izao
Apple dia mampitombo ny haben'ny app Apple TV hatramin'ny 4 GB